Malunga neMpuma Ekude
Isiqinisekiso sethu nembeko
Umatshini kunye neNkonzo
Owomileyo-2017 uSemi oMandla oMbane oGcina iPulp ekubunjwe iTheyibhile Umatshini
I-SD-P09 yasimahla yokuBetha yasimahla yokuCoca ngokuGqibeleleyo Ngokuzenzekelayo Umatshini oLungisiweyo weTafile
LD-12 Series Ukubetha simahla Ukusika amandla oGcina iPulp ekubunjwe iTheyibhile yomatshini
LD-12-1350 Ngokuzenzekelayo Free Ukucheba Free Ukubetha Pulp Ukubumbela Tableware Machine
LD-12-1560 Ngokuzenzekelayo Free Ukucheba Free Ukubetha Pulp Ukubumbela Tableware Machine
LD-12-1850 Ngokuzenzekelayo NgokuSimahla Ukucheba i-Pulp Molded Machineware Machine
Intlama yokuqala yokubumba oomatshini bokulungiselela ukutya eChina
ngomphathi ku 21-02-01
Ngo-1992, iMpuma Ekude yasekwa njengefeknoloji yetekhnoloji egxile kuphuhliso kunye nasekwenzeni ifayibha yokubumba itafile yoomatshini. Kumashumi eminyaka adlulileyo, iMpuma Ekude ibibambisene ngokusondeleyo namaziko ophando lwezenzululwazi kunye neeyunivesithi kuphuhliso lwetekhnoloji oluqhubekayo kunye nokuphucula. ...
I-Far East yeTekhnoloji eNtsha yeRobot yeArhente inyusa kakhulu amandla oMveliso
ngomphathi ku 20-12-25
KwiMpuma Ekude kunye neGeotegrity kugxilwe kubuchwephesha be-R & D kunye nezinto ezintsha, ukuqhubeka nokuphucula iinkqubo zemveliso, ukwazisa ubuchwepheshe obutsha bemveliso, kunye nokwandisa amandla emveliso yezixhobo zokubumba ezilahlwayo. Far East ifayibha zomgubo izixhobo tableware otyhidiweyo ukuvelisa v ...
IMpuma Ekude iya kwiPROPACK China kunye neFOODPACK China uMboniso eShanghai
ngomphathi ku 20-12-03
I-QUANZHOU FAREAST INDALO YOKHUSELEKO LOKUSINGQONGILEYO KWI-CO. LTD Yaya kwi-PROPACK China kunye ne-FOODPACK China Exhibition e-Shanghai kwiZiko leMiboniso lase-Shanghai elitsha (2020.11.25-2020.11.27). Njengokuba phantse ilizwe liphela livinjelwe iplastikhi, i-China nayo iyakuyinqanda i-tableware elahliweyo inyathelo ngenyathelo. S ...
12 Iiseti Intlama Ukubumbela Tableware Izixhobo zithunyelwa eIndiya ngoNovemba 2020
ngomphathi ku 20-11-15
Ngomhla we-15 kweyeNkanga ngo-2020, iiseti ezili-12 eziGcina uQinisekiso lwezaMandla ngokuGcina oomatshini bokuPakisha bokutya ezixonxiweyo zipakishwe zalayishwa ukuze zithunyelwe eIndiya; 5 izikhongozeli ezaliswe 12sets yintlama yokubumba oomatshini eziphambili, iiseti 12 ngumngundo imveliso eyenzelwe kwimarike Indian kunye iiseti 12 h ...
ngathi uthungelwano lokuthengisa uqhakamshele nathi imisebenzi